what, when, why: डिजिटल जीवनको लागि केही सिक्नु पर्ने शिष्टाचार हरु
डिजिटल जीवनको लागि केही सिक्नु पर्ने शिष्टाचार हरु
एउटा समय थियो जब हामी एक सभ्य मानिस थियौ, सभ्य मानिसको परिचय अर्कै थियो तर आज ... आजकल सभ्य मानिस (स्त्री वा पुरुष ) को परिचय अर्कै हुन पुगेको छ । तर आजभोली हामी कही न कही यस्तो प्रश्नको सामना गर्न पुग्छौ " के यो ठीक होला कि कुनै नचिनेको मान्छेको फेसबुक निमन्त्रण देखे पनि नदेखेको गरिदिउं ?" " कुनै रेस्टुरेन्टको टेबुलमा बसेर बिना कुनै अर्डर आफ्नो मोबाईलमा कति फ्रीमा wifi ईन्टरनेट चलाई रहु ?" डिजिटल लाईफ स्टाईलले हाम्रो जीवनमा आफ्नो आचार अनी व्यबहारमा यस्तै यस्तै धेरै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न थालिसकेको छ । यस्तै डिजिटल लाईफमा अब हामीले सिक्नु पर्ने केही शिष्टाचारहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ , तपाईंले पनि अब यस्तो शिष्टाचारहरु सिक्ने बेला भएको छ कि ?
@ प्रत्येक ब्यक्तिगत ईमेलको (जहा सम्म सम्भब छ) समयमा नै reply दिऔं ।
@ ईमेल गर्दा छोटो तर आफ्नो बिषय सँग मात्र सिमित राख्ने र यदि लामो ईमेल छ भने लामो नै जवाफको उपेछा नराख्ने ।
@ धेरै लामो ईमेल पठाउनुको मतलब धेरै सामान लिएर यात्रा गर्नु जस्तै हो त्यसैले लामो यात्रामा जादा धेरै सामान लिएर जादा जती गाह्रो हुन्छ त्यस्तै लामो ईमेल पढ्दा पढ्ने मान्छेलाई पनि त्यती नै अल्छि लाग्छ ।
@ कसैको ईमेलको जवाफ ढिलो दिदै हुनु हुँदैछ पहिले भने क्षमा अबस्य माग्नुहोला ।
@ क्याफेमा ईन्टरनेट चलाऊदै हुनु हुँदैछ भने दोस्रो ब्यक्तीको कम्प्युटरमा हेर्ने नगर्ने ।
@ जब कोही कम्प्युटरमा, एटिममा अथवा अरु कही आफ्नो पासवर्ड टाईप गर्दैछ भने पछाडि हट्ने अथवा अर्कै तर्फ हेर्ने ।
@ कसैलाई online देख्नुको मतलब यो ननिकाल्नुहोस् कि उक्त ब्यक्ती तपाईंको टाईमपास अथवा भिडियो च्याटको लागि उपलब्ध छ , पहिला त्यो ब्यक्तीलाई बिनम्रता पूर्वक सोध्ने गर्नुहोस् ।
@ यदि तपाईंलाई कसैको ईमेल वा अन्य केहीको password कुनै कारण वा माध्यम बाट थाहा भयो भने त्यो ब्यक्तीलाई आफ्नो Password बदल्न भनिदिनु । @ सार्वजनिक स्थलमा मोबाईल बाट कुरा गर्दा सकेसम्म आफ्नो आवाज सानो गर्ने गर्नुहोस् तथा सक्नु हुन्छ भने अन्य ब्यक्ती सँगको दुरी १० फिट राख्नुहोस् ।
@ कोही मान्छे सँगै हुँदा मोबाईलमा कुरा गर्नु पर्यो भने सकेसम्म कुरा छोटो गर्ने ।
@ कसै सँग कुरा गर्दै हुनुहुदैछ र उतीखेरै मोबाईल उठाउनु पर्ने स्थिती आयो भने उठाउनु भन्दा पहिले उक्त ब्यक्तीसँग क्षमा माग्न नबिर्सिने ।
@ अफिसमा मोबाईल फोनको प्रयोग सकेसम्म अफिसकै कामको लागि अथवा थोरै मात्रामा प्रयोग गर्ने ।
@ यदि तपाईं मोबाईल टेबल माथि राख्दै हुनु हुँदैछ भने मोबाईललाई पछाडि पल्टाएर राख्ने र यदि कुनै रेस्टुरेन्ट अथवा क्याफेमा हुँदा मोबाईल सधैं खल्तीमै राख्ने ।
@ हवाइजहाजमा हुँदा निर्देश अनुसार मोबाईलको स्विच अफ गर्ने तथा अस्पातल, लाइब्रेरी, कन्सर्ट आदि ठाउँमा मोबाईल साइलेन्ट मोडमा राख्ने ।
@ परिचित ब्यक्तीको misscall वा छुटेको कल अबस्य पनि फर्काउने तर नचिनेको no. मा नफर्काउने ।
@ यदि कुरा गर्दा गर्दै कल काटियो भने पहिले जसले फोन गरेको छ उसैले फेरी कल गर्ने , दुबै तर्फ बाट कल गर्ने कोशीस नगर्ने ।
@ कसैलाई मिसकल यो भरोसा राखेर नगर्ने कि उसले कल फर्काउछ, यदि पहिले नै यो बारे सहमति भएको छ भने छुट्टै कुरा ।
@ कुनै अग्यात मान्छे वा नचिनेको नम्बरमा कल गर्दा कुरा गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो पुरा परिचय दिने ।
@ तपाईंको मोबाईल कुनै दोश्रो सँग संपर्क बनाइराख्नको लागि हो र यदि यो प्राय बिजी अथवा नो रिप्लाई हुन्छ भने यसको के काम । यो कुरा सधैं ध्यानमा राख्ने ।
@ आफ्नो घरेलु फोटो, निजी फोटो वा साथीहरुसँग मस्तीको फोटो निजी सङ्रहको लागि हो त्यसैले यस्ता फोटो ईन्टरनेटमा सबैको पहुच हुने गरेर नराख्ने र यदि upload गर्दै नै हुनुहुँदैछ भने प्राइभेट एल्बम बनाएर राख्ने ।
@ सार्वजनिक वा अन्लाईन प्रयोगको लागि कुनै सार्वजनिक ठाउँमा फोटो लिदै हुनुहुँदैछ भने यो कुराको ख्याल राख्ने कि कुनै अनजान मान्छे फ्रेममा नदेखियोस ।
@ सिर्फ त्यस्तै फोटोहरु मात्र नेटमा upload गर्ने जो कि तपाईंको आमाले पनि बिना कुनै समस्या सँगै बसेर हेर्न मिलोस ।
@ सोसल नेट्वोर्किङ साईटमा आफ्नो नजिकको साथी, सहयोगी, सहकर्मी अथवा आफ्नो बोस लाई मित्रको रुपमा add गर्नु भन्दा अगाडि एक चोटि फेरी सोच्नुहोस् ।
@ नचिनेको वा विश्वाश गर्न नसकिने ब्यक्ती आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा सामेल भएको छ भने पहिले नै ब्लक गरिदिनुहोस् न कि पछि कुनै समस्या आएर ब्लक गर्ने परोस ।
@ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरुलाई देखे पनि नदेखे झै गरी ध्यान नदिनु कुनै गलत हैन । रिक्वेस्ट accept गर्नु भन्दा पहिले धेरै बिचार गर्नुहोस् । जो पायो त्यसको रिक्वेस्ट accept गर्नु भन्दा छानेर गर्नु राम्रो । फ्रेन्ड लिस्ट लाई धेरै बनाउनु मात्र ठुलो कुरा हैन ।
@ सोसल नेटवोर्किङगको राम्रो साथीहरु माथि पनि धेरै विश्वाश अथवा सहयोगको आश नराख्नुहोस् किनकी सोसल नेटवोर्किङगको दुनियाँ वास्तबिक दुनियाँ भन्दा धेरै अलग छ ।
@ सम्भब भए सम्म ब्यक्तिगत टेक्स्ट मेसेजहरुको रिप्लाई फर्काउने कोशीस गर्नुहोस् ।
@ सन्देश लेख्दा सके सम्म shortcut हरु जस्तै B2B, CCD, WC, TY आदिको प्रयोग नगर्ने किनकी यस्ता शब्दहरुको अरु नै अर्थ पनि लाग्न सक्छ ।
@ वेबक्याम प्रयोग गर्दै हुनुहुँदैछ भने आफु सही मुद्रामा बस्ने धेरै हलचल नगर्ने ।
@ आफ्नो अन्लाईन प्रोफाइलको फोटो प्राय update गर्दै गर्ने र सकेसम्म मात्र आफ्नो ताजा फोटो त्यहा पोस्ट गर्ने न कि परिवार, साथीहरु वा यस्तै अरु सँग बसेको फोटो त्यहा राख्ने ।
@ कुनै क्याफे वा रेस्टुराँमा फ्री मा wifi ईन्टरनेट चलाऊन पाइयो भनेर दङग नपर्नुहोस् , तपाईंले खाएको बिलमा त्यसको पनि charge जोडीएर आएको हुन्छ ।
@ बिना अनुमती अरुको मोबाईल फोन , टि.भी , डि.भि.डि आदि चलाऊने नगरनुहोस् ।
@ कुनै सोसल नेट्वोर्किङ साईटको wall मा जरुरत भन्दा ज्यादा निजी कुरा पोस्ट नगर्नुहोस् । यदि कसैको लागि सन्देस नै छ भने त्यसको लागि ईमेलको प्रयोग गर्नुहोस् ।
@ तपाईंको अन्लाईन चरित्रको बारेमा गूगल वा यस्तै अरु साईटहरुलाई सबै थाहा हुन्छ त्यसैले ईन्टरनेटमा आफ्नो गोपनिय कुरा, बैंक अकाउन्ट नम्बर , क्रेडिट कार्ड नम्बर आदि सकेसम्म लेख्ने नगर्नुहोस् । ईन्टरनेटमा आफ्नो व्यबहारलाई सम्यमित राक्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
@ आफ्नो बच्चाहरुको ईन्टरनेट सर्फिङग लुकेर जासुसी गर्ने भन्दा नेट सर्फिङग उनिहरुकै सँगै बसेर गर्ने गराउने गर्नुहोस् ।
@ आफ्नो मोबाईल , फोन , कम्प्युटर , ल्यापटप आदि चल्दा चल्दै बन्द भयो भने रिसको झोकमा त्यसलाई बजार्ने , हिर्काउने , हलाउने आदि नगर्नुहोस् , यस्तो भएमा त्यसमा केही खराबी भएको हुन सक्छ र त्यसलाई सही ठाउँमा लगेर ठीक गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
@ डिजीटल मेडिया कम्प्युटर ईन्टरनेट आदि बाट कहिले काही दुरि पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोस् कहिले काही उपवास वा ध्यानमा पनि बस्ने गर्नुहोस् यसले तपाईंको दिमाग फ्रेस गर्नेछ ।
@ बिभिन्न देश अनुसार डिजीटल शिश्टाचारहरु, आचार -व्यबहारहरु फरक फरक हुन सक्छन त्यसैले देश अनुसार आफ्नो शिश्टाचार सिक्ने कोशीस गर्नुहोस् ।
तपाईंलाई माथि उल्लेखित शिष्टाचारहरु मध्य सबै भन्दा उचित तथा अनुचित कुन कुन लाग्यो ??? कमेन्ट दिन नबिर्सिनुहोस् है त ।
Wow !धेरै नै उपयोगी टिप्सहरू Ramesh sir.www.basnetg.com